तपाईले बोलेका कुराले कस्तो तनाव दिन्छ बालबालिकालाई ?
Sun, May 27, 2018 | 19:21:06 NST
18:38 PM (1 year ago)
Total Views: 31.9 K
१२ वर्षका समिर (नाम परिर्वतन) आफ्नो बुवासँग एकदमै झुमिनुहुन्थ्यो । तीन वर्ष अघि समिरका बुवा मलेसिया जानुभयो । मलेसियाबाट फर्किंदा उहाँले पैसा त लिएर आउनुभयो तर सँगै एड्स पनि लिएर आउनुभयो । त्यो कुरा समिरले केही समयपछि थाहा पाए ।
एकदिन समिरले घरमा कुराकानी हुँदा आफ्नो बाबा अब केही दिनको पाहुना मात्रै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए । त्यसपछि त समिरले बाबाले अब जुनसुकै बेला हामीलाई सँधैका लागि छोडेर जाने हो ? भनेर सोध्न थाले । त्यसको केही समयपछि समिर कम बोल्न थाले । अहिले पनि उनको अवस्था त्यस्तै छ । समिर अहिले त्यति बोल्दैनन् चुपचाप लागेर बाबालाई हेरिरहन्छन् र आँखाबाट आँसु खसालिरहन्छन् ।
सागर (नाम परिवर्तन) अहिले १५ बर्षको भए तर उनलाई प्रहरी देख्यो की डर लाग्छ । सागरको विद्यालय जाने बाटोमै प्रहरी चौकी छ । त्यही भएर सागर त्यो बाटै हिँड्दैनन् । सागर अर्को बाटो घुमेर विद्यालय जान्छन् । सागरलाई किन त्यसो गरेको त भनेर सोध्दा उनी सानोमा आमासँग केही माग्दा आमाले प्रहरीले पक्रिन्छ भनेर डर देखाउनुहुन्थ्यो त्यही भएर प्रहरीसँग डर लाग्छ भन्छन् ।
अभिभावकले कुराकानी गर्दा बालबालिकाले अपेक्षा र कल्पना नगरेको कुरा गर्दा उनीहरुलाई तनाव हुँदो रहेछ भन्ने समिरका समस्या सुन्दा थाहा हुन्छ । त्यस्तै केही छिनको आफ्नो फाईदा र स्वार्थको लागि बालबालिकाहरुलाई अभिभावकहरुले अनावश्यक डर देखाउँदा, शारीरिक दण्ड तथा मनमा गहिरो चोट पुग्ने खालका शब्दको प्रयोग र गाली गर्दा पनि बालबालिकाको मष्तिष्कमा नराम्रो असर पर्ने रहेछ भन्ने सागरका कुरा सुन्दा थाहा हुन्छ ।
त्यति मात्रै होइन आफनो काम लिनलाई बालबालिकालाई झुटो आश्वासन दिने अनि काम पूरा भएपछि उनीहरुले भनेका वा मागेका कुरा पुरा नगरिदिने बानी पनि धेरै अभिभावकको छ । बालबालिकाहरुले गरेको सकारात्मक कामको कहिले प्रशंशा नगर्ने तर केही गल्ती गरेमा त्यही कुरालाई लिएर सँधै गाली गरिरहँदा उसको मानसिकतामा नराम्रो असर पर्ने देखिन्छ ।
वास्तवमा बालबालिकाको तनाब बढाउने काममा उनीहरुका परिवारकै सदस्यको काम नै मुख्य कारण देखिन्छ । उनीहरुले चाहेर बालबालिकालाई तनाव दिएका होइनन् तर पनि उनीहरुले गर्ने ससाना कामले पनि पछिसम्म मानसिक असर पर्ने गरी तनाव दिइने कुरा समिर र सागरका कुरा सुन्दा नै थाहा हुन्छ ।
बालबालिकालाई तनावबाट छुटकारा दिलाउन अभिभावकले के गर्ने त ?
सबैभन्दा पहिले बालबालिकाहरुका अगाडि के कुरा गर्नु हुन्छ के कुरा गर्नुहुँदैन भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । त्यसलाई नै आफ्नै दैनिक रुपमा व्यवहारमा प्रयोग गर्नुपर्छ । डर देखाएर बालबालिकाहरुलाई काम लगाउनुहुँदैन ।
डरले तत्कालको लागि फाईदा पुर्याएपनि भविष्यमा बालबालिकाहरुलाई डरपोक र कमजोर बनाई दिन्छ । जसको उदारण सागर पनि हुन्।आफ्ना बालबालिकाहरुलाई सुरक्षाको अनुभूति गराउनुहोस् ताकी उनीहरुलाई लागोस् मलाई आवश्यक परेको बेलामा मेरो सहयोगी हातहरु आमाबुबा हुन भन्ने लाग्नुपर्छ ।
बालबालिकाहरुसँग कुराकानी गरेर उनीहरुका कुरा सुनिदिनुस् अथार्त सिधै बालबालिकाको कुरालाई खारेज नगर्नुहोस् । बालबालिकाले देखाउने तनाव, डर र त्रास कम गराउनका लागि उनीहरुुसँग खेल्नुहोस् र समय पनि दिनुहोस् ।
तनाव, डर र त्रासका कारण पहिचान गरी त्यसलाई घटाउने उपायहरुको सूचि तयार पार्नुहोस् र त्यसलाई दैनिक रुपमा आफनो व्यवहारमा प्रयोग गर्नुहोस् ।
(दुर्गाप्रसाद भट्टराई सर्लाहीको ग्रमिण नारी उत्थान संघ हरिपुरको सहजीकरणमा हरिऔनमा संचालित सुरक्षित आप्रवासन सूचना तथा परामर्श केन्द्रमा मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)